ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလှထွန်းကပင်စင်စားတွေ ပင်စင်ထုတ်တာမြန်အောင်လို့ရက်တိုးပေးကာမှ အဖွားမှာ မသေတာကံကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလှထွန်းကပင်စင်စားတွေ ပင်စင်ထုတ်တာမြန်အောင်လို့ရက်တိုးပေးကာမှ အဖွားမှာ မသေတာကံကောင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလှထွန်းကပင်စင်စားတွေ ပင်စင်ထုတ်တာမြန်အောင်လို့ရက်တိုးပေးကာမှ အဖွားမှာ မသေတာကံကောင်း
- Nann Kay Khine
Posted by Nann Kay Khine on Mar 9, 2012 in Copy/Paste |9comments
တိုးလာတဲ့ပင်စင်လစာလေး လှူရ စားရမလားမှတ်တယ် ဆေးဖိုးဖြစ်သွားတဲ့အဖွားရဲ့ဖြစ်ရပ်ပါ။
1.3.2012 နေ့ ရက်စွဲပါ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၌ ပါရှိသော မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းကဏ္ဍ၌ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မေးခွန်း (၂)ခု နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလှထွန်းကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည့် သတင်းစာပါအကြောင်းအရာကိုဖတ်ရှုမိပြီး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျမသည်အဖွားနှင့်အတူ မြို့ထဲ၇ှိ မြန်မာ့စီးပွားေ၇းဘဏ်ခွဲတစ်ခု သို့ ပင်စင်လစာငွေ သွားရောက်ထုပ်ယူရန်သွားခဲ့သည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတစ်ခုကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။
သတင်းစာတွင်ပါ၇ှိသည့်အတိုင်း ယခုအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် အငြိမ်းစားလစာထုတ်ယူရမည့်ရက်ကို 2012 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ လမကုန်မီ (10)ရက်ထုတ်ပေးရန်ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပါရှိ၍ အဖွားတစ်ယောက်ဝမ်းသာစွာနှင့် အရင်လိုငွေထုတ်ရင်လူအများကြီးကို စောင့်စရာမလိုတော့ပြီ ဆို၍ ကျောင်းဆရာမ ပင်စင်ငွေလေးအားထုတ်ယူရန်သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ဘဏ်ဖွင့်ချိန်အမှီသွားရောက်ခဲ့သော်လည်း ရှေ့တွင်ရှိသော လူအုပ်ကြီးက ဘယ်အချိန်ကတည်းကစောင့်နေမှန်းမသိများစွာ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ရှေး၇ိုးမူအတိုင်းပင် လက်ရေးနှင့်ရေးးသွင်း ၊ တန်းစီစနစ်နှင့် ရုံး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းပင်ဘဏ်ဝန်ထမ်းများက လုပ်ပေးနေသော်ငြားလည်း များပြားလှသည့် ပင်စင်စား အသက်အ၇ွယ်ကြီးသူများက ပင်ပန်းစွာနှင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြရပါသည်။အသက်အ၇ွယ်ကြီးရင့်သော လူကြီးများအတွက် အဆင်မပြေမှုများကို တွေ့၇ှိခဲ့ရပါသည်။ ဒီအထဲတွင်ကျမနှင့်အဖွားလည်းအပါအ၀င်ပါ။ လူငယ်တွေအတွက်တော့ခံနိုင်ရည်၇ှိနိုင်ပေမဲ့ လူကြီးများအတွက်တော့အဆင်မပြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ များပြားလှတဲ့လူအုပ်ထဲမှာ အသက်ကြီးလှသည့်ကျမရဲ့အဖွား သူ့ရဲ့အလှည့်ကိုစောင့်ရင်းနှင့်မူးလဲခဲ့ရပါတယ်။ ပင်စင်ငွေကိုလဲမထုတ်နိုင်တော့ပဲ ဆေးခန်းကိုကားငှားပြီး တန်းပြေးရရော။ ဟော…ဆေးခန်းရောက် ဆေးသွင်းခ၊ အားဆေးဝယ်ခ၊ ဆရာဝန်ပြခ၊ ဆေးစာရင်း Bill လဲထွက်လာရော ကုန်ပါပြီ ပင်စင်လစာတစ်လစာလေး….အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ပိုတဲ့ငွေလေးကိုလက်ထဲမှာကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့အဖွားကိုကြည့်ပြီး
ကျမလဲအဖွားကိုအိမ်သို့ပြန်ခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာ ကျမစဉ်းစားမိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု၇ှိခဲ့ပါတယ်။
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်တင်နွယ်ဦးတင်ပြတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမှာ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းပေါင်း (ရ၄၂၅) ဦးရှိတယ်ပြောပါတယ်။ ၀န်ကြီးက (၁၀) ရက်ကြိုပြီးလုပ်ပေးတယ်ပြောတော့ တစ်ရက်ကို လူပေါင်း (၇၄၂) ဦးကိုပဲထုတ်ပေးတယ်ထားဦး…. တစ်ဦးကို (၂) မိနစ် ပဲ ကြာတယ်ထား….. (တကယ်တော့သိတဲ့အတိုင်း ၅ မိနစ် ဆိုတဲ့အချိန်တောင် နည်းပါသေးတယ်။) စုစုပေါင်း ၂ x ရ၄၂ = ၁၄၈၄ မိနစ် (၂၄.၇ နာရီ) နေ့နဲ့တွက်ရင်တော့ တစ်ရက်လုံးလုံးကြာပါလိမ့်မယ် …..
ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အလီကြေညက်ခဲ့ရင်တော့ နားလည်နိုင်မှာပါ။ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်ဘဏ်ရှေ့မှာ လမ်းဘေး ပလက်ဖေါင်းဘေးမှာ၊ အုတ်ခုံလေးမှာ၊ ရေမြောင်းဘေးမှာ၊ လမ်းဘေးမှာ၊ ကောင်တာတွေရှေ့မှာ နာရီပေါင်းမြောက်များစွာ ထိုင်ဘူးရင်တော့ ကိုယ်ချင်း စာတတ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကတော့ထင်မှာဘဲ အရင်ကဘာမှမဖြစ်ဘဲ ဒီိလိုဘဲလုပ်လာတယ်လို့….
ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရေ… ပြောပြပါရစေ… အရင်က ပင်စင်လစာလေးက ရာဂဏန်း ထောင်ဂဏန်းလောက်ကို ကားခကုန်၊ အပင်ပန်းခံပြီး လတိုင်းသွားမထုတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုလို အမျှော်အမြင်ကြီးတဲ့ သမကြီးက ပင်စင်လစာတွေကို လောက်လောက်လားလား တိုးပေးလိုက်တော့ကျမရဲ့အဖွားအပါအ၀င် ပင်စင်စားအဖေတို့အမေတို့လဲ ၀မ်းသာအားရ လှူဖို့တန်းဖို့၊ သုံးစွဲဖို့ လတိုင်းတော့ထုတ်ချင်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ထမင်းတစ်လုပ် ဒုတ်တစ်ချက် ဆိုသလို ပင်စင်လစာသွားထုတ်တိုင်း အသက်ကြီးပြီဖြစ်တဲ့၊ အားနည်းနေကြပြီဖြစ်တဲ့ ချွေရံသင်းပင်းနည်းပြီး ပို့ဆောင်ပေးသူမရှိတဲ့ အဖိုးတွေအဖွားတွေ အတွက်တော့ စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်ကြာလွန်းတာကတော့ ပင်ပန်းလွန်းအားကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ဘဏ်ကြီးရယ်… ဒီနေ့တိုးတက်နေတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ computer software တွေသုံးသင့်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါလျက် နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်းတွေကိုတောင်ပင်စင်လစာတိုးပေးနိုင်ပါလျက် ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ထဲမှာ ယခုထက်တိုင် လက်ေ၇းနှင့်ေ၇းသွင်းနေသော စာ၇င်းဇယားများကိုပြောင်းလဲသင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
အခုထိဘဏ်စာရင်းစာအုပ် လူနှစ်ရပ်စာလောက်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စာရင်းကို ရှာပြီးလုပ်နေသ၍တော့ အဖိုးအဖွားတွေ ပိုက်ဆံမသုံးရဘဲ အားလုံး ဆေးဖိုးသာဖြစ်သွားတော့မှာဖြစ်လို့
About Nann Kay Khine
Nann Kay Khine has written 1 post in this Website..
View all posts by Nann Kay Khine →
ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ထဲမှာ ယခုထက်တိုင် လက်ေ၇းနှင့်ေ၇းသွင်းနေသော စာ၇င်းဇယားများကိုပြောင်းလဲ
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကတော့ဗျာ …….ခုထိကို လွဲတုန်း။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တင်မက ၊ စစ်တပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသော အင်းဝဘဏ် နှင့် အချို့ သော ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်အချို့ မှာ ယနေ့ ထိတိုင် ၊ ကွန်ပျူတာ ဆိုတာ ငါးဖမ်းတဲ့ ကွန်ကြီး ပြူတစ်ပြူတစ် နဲ့ တာစူနေတယ် လို့ ထင်နေကြတုန်းဘဲဗျို့ ။
ကျွန်မအဒေါ်အတွက်ပင်စင်သွားလုပ်တုန်းက စာဝင်ဋ္ဌာနမှာ စာဝင်ရက်စွဲသွားကြည့်ပေးပါဆိုလို့ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်တာ၊ စာဝင်ဋ္ဌာနက ၀န်ထမ်းကသတင်းစာဖတ်နေတယ်။ ကျွန်မကကြည့်ပေးပါဆိုတော့စာအုပ် ၃ အုပ်တောင်ရှိတာဘယ်စာအုပ်မှန်းမသိဘူး၊ မကြည့်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးဟောက်လွှတ်တာ။ ရှာပေးပါဆိုတော့ မအားဘူးတဲ့။ ၁ ထောင်လောက်ပေး လိုက်ရင်ပြီးမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ပင်စင်စားအဘွားကြီးတွေကိုဒီလို မလုပ်သင့်ဘူး ထင်တာနဲ့မပေးပဲ ကိုယ်တိုင်ရှာမယ်စာအုပ်ပေးဆိုတော့လဲမပေးဘူး။ ရှာပေး ဆိုတော့ လဲမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးကျွန်မ နဲ့ ကောင်တာရှေ့မှာအော်ကြဟစ်ကြနဲ့ပေါ့။ ကျွန်မကလဲရှာမှာလားမရှာဘူး လားဆိုအော်။ သူကလဲ မရှာဘူးဆို အော်နဲ့လူတွေလဲဝိုင်းကြည့်ပေါ့။ ဒါနဲ့ကျွန်မလဲဘယ်မလဲမန်နေဂျာ။ မန်နေဂျာနဲ့ပဲပြောမယ် ဆိုပြီးထွက်လဲသွားရောလိုက်ဆွဲပြီးတောင်းပန်ပြီးရှာပေးလိုက်တယ်။ အဲလိုမျိုး တွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေနိုင်တယ်။ တချို့ကလဲကြောက်တော့ ပေးပြီးလုပ်ခိုင်းကြတယ်။ ကျွန်မကတော့ တပြားမှမပေးခဲ့ဘူး။
တချိူ့ Bank Staff တွေက ဒီလိုပြော မှရတယ်
သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေလည်း E-Governmentယိင်းပြောတဲ့ ကွန်ပြူတာ၊အင်တာနက်အစရှိတာတွေကို
အသုံးပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ သတင်းစာအများစုမှာလွန်ခဲ့တဲ့လပေါင်းများစွာက ဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အီးဂါးဗားမန့်ဖြစ်တာအသာထားဦး အီးပါတဲ့အိမ်သာတွေတောင် ရေဆွဲချလို့မရ ညစ်ပတ်စုတ်
ဒါတွေအရင်လုပ်နိုင်မှ ရှမ်းပြည်သားတို့ အီးဂါးဗားမန့်စနစ်ကြီးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်လို့ယုံတယ်။
ယိင်းတို့အဖွားကိုပြောပေးပါ ပင်စင်ထုတ်ရင် လူအနဲဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်ရက်ကိုရွေးပြီးသွားပါ။
ယိင်းပြောတဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ့် ရုံးစာရေးတွေတောင်လက်နှိပ်စက်ကို လူတိုင်းမရိုက်တတ်
သေးလေတော့ ခါပြောတဲ့အီးပါတဲ့အိမ်သာတွေတောင်ကောင်းမွန်အောင်သန့်ရှင်းအောင် မလုပ်နိုင်သေး
တောင်ကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်သေးရင် သူတို့ပြောကြတဲ့အီးဂါးဗားမန့်ကြီးကတော့ နှစ်သုံးဆယ်စီမံကိန်း
(မှတ်ချက်။ ။ မာမီပေါက်နဲ့ဒယ်ဒီပဒုမာတို့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အီးများများနှင့်အိမ်သာအကြောင်း
တို့ကို ထည့်သွင်းရေးသားသွားပါကြောင်း အဲဗရီးတိုင်းအီးပန်းနေတတ်သော၊အီးအကြောင်းပါမှ စကားပြော
ကောင်းတတ်သော မာမီပေါက်နှင့် အိမ်သာများညစ်ပတ်သည်တို့ကိုတွေ့လျှင် ကိုယ့်သိက္ခာပျက်စီးမည်၊
လူအများဝိုင်းဟားမည်ကိုမစိုးရွံ့ဘဲ တာဝန်ကိုသိတတ်သောနိုင်ငံကြီးသားပီသလှသည့် ဒယ်ဒီပဒုမာ တို့
အတွက်တော့ အထူးအလေးထားပြီး အဆင်ပြေမဲ့ စံနစ်တစ်ခု
ဘဏ်တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းသင့်နေပါပြီ